DHAGEYSO XASAN JAAMICI U DHASHAY GALMUDUG AYEEYO 90 JIR AH KU GUBAY NO-50 SHABEELLAHA-HOOSE JBM | SMC
Home WARARKA MAANTA DHAGEYSO XASAN JAAMICI U DHASHAY GALMUDUG AYEEYO 90 JIR AH KU GUBAY...
DHAGEYSO XASAN JAAMICI U DHASHAY GALMUDUG AYEEYO 90 JIR AH KU GUBAY NO-50 SHABEELLAHA-HOOSE JBM
Ayeeyo-Gube Xasan Jaamici oo hoggaan u ah mooryaan Garreyda la magac baxday Guutada 3-aad taasoo hada ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha-Hoose JBM ayaa wuxuu gobolka Shabeellada-Hoose ka geysatay xasuuq iyo barakicin Baahsan oo uu ku beegsanayay dadka rayidka ah ee ku dhaqan gobolkan lagu soo duulay.
Waxaan caawa halkaan idinkugu soo gudbineeynaa Illaahay ha u wada naxariistee magacyada iyo goobaha ay ku noolaayeen dadkii ay xasuuqday Guutada 3-aad iyo sidoo kale maamooyinkii ay kufsi iyo dil isugu dareen Guutada Sadexaad.
(1)Sanadku markuu ahaa 2014 guutada 3-aad deegaanka #BADAR JBM waxay si arxandarra ugu dileen islaan xaamilo ah oo leh uur sagaal bilood iyo ninkeeda xili habeennimo ah.
Magacyada labadaan marxuum ayaa waxaa lagu kala magacaabaa 1-Aabbe Shariif Nuur Maxamed oo 30 jir ah.2-Hooyo Fadumo ibrahim Cali oo 27 jir ah
Isla sanadkii 2014 kii Guutada Sedaxaad waxay dil iyo kufsi ka gaysteen deegaanka lagu magacaabo #DANADA JBM oo u dhaxeeya #Ceelwareegow iyo #Buufoow Gobolka Shabeellaha-Hoose Jamhuuriyadda Barakaysan Ee Maaylan.
Odayaal xoolo-dhaqato ah oo xoolo ka waraabinayay warta lagu magacaabo Warta #Danada JBM ayaa Guutada Sedexaad waxay ku dileen warta #DANADA odayaashii, sidoo kale, hooyooyin beeraleey ah oo beero ka falanayay meel u dhow warta Danada ayaa guutada Sedexaad waxay ku kufsadeen halkaasi,
Magacyada odayaasha ay guutada Sedexaad ku dishay warta #Danada gobolka Shabeellaha-Hoose JBM:-1- Aabbe Nuur Talaash Barre oo 25 jir ah. 2- Aabbe Cali Caleyti Axmed oo 38 jir ah. 3- Aabbe Shiiqow Jeelle Muuse oo 40 jir ah. 4- Aabbe Maaddeey Cusmaan oo 35 jir ah.
Magacyada hooyooyinka guutada Sedaxaad Xasan Jaamici iyo mooryaantiisu reer Galmuduggi ay kufsi iyo jirdil isugu dareen Warta #Danada gobolka Shabeellaha-Hoose JBM waa:- 1- Hooyo Boolo Caraay maxamed oo 27 jir ah. 2- Hooyo Nuurto mooge oo 36 jir ah. 3- Hooyo Xakiimo Axmed Hurdaay oo 39 jir ah. 4- Hooyo Faadumo Shiiqeey oo 40 jir ah. 5-Hooyo Sokoreey Abiikar Ahmed oo 50 jir ah
Sido kale, sanadku markuu ahaab2015-kii waxay Guutada Seddexaad gaysatay dilal iyo kufsi baahsan,
Odayaal isugu jira beeraleey iyo ganacsato, ayaa guutada Seddexaad waxay si wuxuushnimo ah ugu dishay deegaanka Shalambood gobolka Shabeellaha-Hoose JBM.
Odayaashaan ayaa guutada Seddexaad kolkay dileen, waxay ku soo jiideen gaari teknik nuuca Cabdi-Bilaha loo yaqaan oo ay saaran tahay Astaanta Ciidamada Xooga Dalka Federaalka Soomaaliyeed, waxay keeneen maydidkii waayeellada oo sidii baqti gaadiid ay ugu dabaxireen deegaanka #Buufoow gobolka Shabeellaha-Hoose JBM oo xiligaas ay iyagu ku sugnaayeen qolyaha mooryaanta reer Galmuduggi, balse xiran darayska, ama tuutaha qaranka Soomaaliya.
Magacyada marxuumyada lagu dilay Shalanbood gobolka Shabeellaha-Hoose JBM:- 1-Ganacsade Maxamed Cismaan Ibraahim oo 60 jir ah .2-Beereleey Yuusuf Abshir Abiikar oo 50 jir ah. 3-Beeraleey Maxamed Siidii xasan oo 65 jir ah.
Sido kale, isla sanadkii 2015-kii guutada Seddexaad deegaanka #Jeebeey gobolka Shabeellaha-Hoose JBM waxay si caaqnima ah ugu dishay oday beeraley ah u dhashay JBM, waxaana magaca aabaha lagu dilay #Jeebeey JBM lagu caabi jiray marxuum Cabdi Maxamed Yuusuf oo 30 jir ah.
Sido kale, isla sanadkii 2015-kii guutada Seddexaad deegaanka #Ceelwareegow gobolka Shabeellaha-Hoose JBM waxay si bagaimana ah ugu dishay odayaal beeraleey ah iyana u dhashay Maayland, kuahaasoo magacaantoodu ay kala ahaayeen sida:- 1.Aabbe Maaddey Xasan Foodey oo 50 jir ah. 2.Aabbe Cumar Cali Muuse oo 60 jir ah. 3 Aabbe Maxamed Shiikh Hiirale oo 40 jir ah
Sido kale, isla Sanadkii 2015-kii Guutada Seddexaad waxay si arxan-dara ugu dishay deegaanka #Buula-Mareer gobolka Shabeellaha-Hoose JBM gudoomiye ku-xigeenkii deegaankaasi iyo sido kale iyago dhaawac halis ah uga gaysteen ganacsade caan ah u dhashay Maayland halkaasi.
Magaca marxuumka la dilay ayaa ahaavMaxamed C/LLaahi Nuur (Dhaltoon)oo 32 jir ah, halka ganacsadaha dhaawacyada loo gaystayna lagu magacaabo Siciid Gulumbe.
Isla Sanadkii 2015-kii Guutada 3-aad waxay si naxariista ka baxsan ugu dishay deegaanka #Nagaadweyne gobolka Shabeellaha-Hoose JBM oday Beeraleey ah u dhashay Maayland magaciisu yahay marxuum Maxamed Sheekh Nuur Xasan oo 32 jir ah.
Isla Sanadkii 2015-kii Guutada Seddexaad waxay dil iyo kufsi ka gaysteen degmada Marka Caddey xarunta gobolka Shabeellaha-Hoose Jamhuuriyadda Barakaysan Ee Maayland, waxaana magaca marxuumka la dilay uu yahay gudaha Marka JBM sida:- Make Abow Dhegacade oo 39 jir ah, iyado magacyada hooyooyinka la kufsadayna ay kala yihiin sida:- 1-Nuurtooy Cusmaan oo 29 jir ah.2-Faadumo Maaddey Barash oo 32 jir ah.
Dhibaatooyinkii ay gaysatay guutada Seddexaad Sanadku markuu ahaa 2016-kii,
Sanadku markuu ahaa 2016-kii Guutada Seddexaad waxay deegaanka #Siinaay gobolka Shabeellaha-Hoose JBM ay ku gubeen maamo iyo 6 Caruur oo ay ayeeyo u tahay, waxaana magacyada maamada iyo caruurta ay guutada 3-aad reer Galmuduggi ku gubtay deegaanka #Siinaay JBM ka mid ah sida:- 1-Ayeeyo Khadiijo Nuur Maxamed oo 80 jir ah 2-Farxiyo Cabdi Maxamed oo 10 sano jir ah. 3-Naciimo Cabdi Maxamed oo 7 sano jir ah. 4-Axmed Cabdi Maxamed oo 5 sano jir ah.5-Meymuna Cabdi Maxamed oo 3 sano jir ah. 6-Zakariye Cabdi Maxamed oo 2 sano jir ah. 7-Nuur Cabdi Maxamed oo 3 bilood jir ah
Sanadku kolkuu ahaa 2016-kii guutada seddexaad waxay deegaanka Shalanbood ku kufsadeen hooyooyin waayeelo ah, kuwaaso magacyadoodu ay kala yihiin maamooyinka ay guutadu reer Galmuduggi kufsadeen sida:- 1-Hooyo Abbaay Maaddeey oo 80 sano jir
ah. 2-Hooyo khadiijo xuseen Daa,ud oo 30 sano jir ah
Isla sanadkii 2016- kii guutada seddexaad waxay magaalada Marka xarubta gobolka Shabeellaha-Hoose JBM ku dishay labo marxuum, kuwaasoo ay u dishay si arxan-darro ah, waxaana marxuumada la dilay guutada Saddexaad reer Galmuduggi ay kasoo tuuryeeyeen sarta SWISS-KALMO ay ka deganaan jirtay magaalada marka gobolka Shabeellaha-Hoose JBM, isla NGO SWISS-KALMO ay ku qaraabtaan qolyo reer Galmudug ah, isla kuwii ku soo duulay dhulka Maayland ah, iyado magacyada labada marxuum ay kala ahaayeen sida:- 1-Doctor yuusuf isaaq Nuur oo 45 sano jir ah iyo 2-Axmed cusmaan Geesdheer oo 20 sano mir ah.
Previous articleSawiro: Degmada Tiyeeglow Oo Laga Bilaaweyn Dhismaha Weyn Ee Masjidka Jaamac.
Next articleXog Daxsoon Farmaajo iyo Lafta Gareen oo Dhabarka Is Xijiyey.